MAANHADAL: DFS oo hakisey shahaadooyinkii ardeyda dugsiyada sare ee Puntland (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
MAANHADAL: DFS oo hakisey shahaadooyinkii ardeyda dugsiyada sare ee Puntland (dhegayso | daawo)
Seteembar 13, 2019 6:50 g 0
Kulanti wacan dhegaystiyaal Barnaamijka Maanhadal todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dowladda Federaalka oo hakisay hakisey shahaadooyinkii ardayda dugsiyada sare ee Puntland.
Hadaba DFS xaq ma u leedahay in ay siyaasad aargoosasho ah ardada Puntland la beegsato, mustaqbalkoodana mugdi galiso? Tan kale, tani caddayn ma u tahay in DFS aysan rabin nidaamka Federalka? Waa se maxay doorka qalad ee dowladda Puntland, waaba haddii ay qalad ku leedahay siyaasadda waxbarashada oo ah mid u taal maamul goboleedyada?
MAANHADAL iyo maanta waxaa soojeedinaya wariye Axmed Sheekh Maxamed (Tallman).
Hoosna ka daawo.
Odayaasha Ballanbale iyo Ciidamadda DFS oo heshiis kuwada gaaray degaankas